स्वायत्तताको लागि संघात्मकतामा
Sunday, January 14th 2007, 9:12 PM 48 0
स्वायत्तताको लागि संघात्मकतामा:
राजतन्त्र हाम्रो समस्या हो। त्यसकारणले संविधानसभा, समावेशीकरण र लोकतन्त्रको कुरा गर्दा राजतन्त्रलाई आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। राजतन्त्रलाई आउट नगरीकन हाम्रो कुराहरु इन हुँदैन। तर, राजतन्त्र मात्र आउट गरेर त्यसबाट हाम्रा हक, अधिकारहरु पुनःस्थापित हुँदैनन्। त्यसको लागि बाहुनवाद पनि अन्त्य हुनुपर्छ। बाहुनवाद रहुञ्जेल हाम्रा हक, अधिकारहरु सुनिश्चित हुन सक्दैनन्।
लोकतन्त्र आयो भन्यो त्यही ५ जना बाहुनहरु बस्नुपर्ने, वार्ता टोलीमा पनि बाहुनहरुमात्र हुने। शीर्ष नेताहरु पनि अधिकांश बाहुन, क्षेत्री हुने भएपछि समस्या जहाँको त्यहीँ भयो। आउने संविधान पनि त्यही बाहुन, क्षेत्रीकै अनुहारको आउला। त्यसबाट आउने नयाँ नेपाल पनि त्यही बाहुन, क्षेत्री अनुहार भएको आयो भने त २३८ बर्ष त्यो कुरुप अनुहार हेर्दा हेर्दा हामी हुरुक्कै भइसक्यौं। अब त हामी राम्रो इद्रेणी अनुहार हेर्न चाहान्छौं।
नेपालमा राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै हिँड्न सक्दैन। बाहुनवाद र लोकतन्त्र पनि सँगै हिँड्न सक्दैन। पितृसत्ता र लोकतन्त्र पनि सँगै हिँड्न सक्दैन। पहाडिया एकाधिकारवाद र लोकतन्त्र पनि सँगै हिंड्न सक्दैन। तसर्थ, यी कुराहरुको अन्त्य नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं।
त्यसरी अगाडि बढ्नलाई समावेशीकरण भनेर दयामायाको आधारमा हामीलाई भित्र पस्न देउ, समावेश गरिदेउ भन्ने होइन। समावेशीकरण हाम्रो न्युनतम माग हो। नेपालमा बाहुन, क्षेत्रीहरुले गएको २३८ बर्षम्म डाडु पन्यु समाएर बसेका छौ। झ्याल ढोका बन्द गरेर धरहरामा बसेका छौ। त्यसकारण हामीले समानुपातिक स्थान पाउनु पर्यो। र, आदिवासी/जनजातिको हैसियतबाट पाउने हाम्रो नैर्सर्गिक अधिकार हामीले पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो।
आदिवासी/जनजातिको लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय, भाषिक, क्षेत्रगत स्वायत्तता हुनुपर्यो। धर्मनिरपेक्षताका कुरा, समान भाषिक अधिकारका कुरा, सामूहिक अधिकारका कुरा, परम्परागत अधिकारका कुराहरु, प्राकृतिक श्रोतहरुमाथिको कुराहरुको लागि आदिवासी/जनजातिहरु संघर्षरत छन्। शान्तिपूर्ण तरिकाले शासक र उत्पीडनमा पारिएका समुहहरुबीच राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भए हाम्रो सामूहिक र व्यक्तिगत हैसियतबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व र त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि गएर जातीय, भाषिक, स्वायत्तता दिइसकेपछि त्यसभित्र समानुपातिकदेखि अरु कुराहरुको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्ने आधारबाट अगाडि गइरहेको कुरा हो। त्यसकारण समावेशीको रुपमा अर्काको दयामायाको कुराभन्दा पनि हाम्रो हक अधिकारको कुराहरु शान्तिपूर्ण तवरले गर्दै आएका छौं।
संविधानसभामा नै समावेशीकरणको कुरा उठाउँदा हामीलाई बाहुनवादीहरुले विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक, झिंगाको पित्तजस्तो सोच भएको, बाइसे चौबीसे भुरे टाकुरामा लैजाने, आधुनिक युग सुहाउँदो नभएको भन्ने नाना प्रकारका लाञ्छना लगाउँछन्। तर, त्यही कुरा बाहुन, क्षेत्रीले भनिदिए भने ओहो, वहाँहरुको कत्रो चौडा छाती भन्नुपर्ने हुन्छ।
हिरालाई हिराले काट्छ भनेजस्तै एकाधिकारवादी बाहुनवादी बाहुन, क्षेत्रीहरुलाई उदारवादी बाहुन, क्षेत्रीहरुले नै काट्नुपर्यो। तसर्थ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालजस्ता बाहुनहरुको एकाधिकारवादी शक्तिका कुराहरुलाई प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता बाहुनहरुले नै काट्नुपर्यो। तर, प्रकृतिको नियमानुसार किरातहरुले काट्दा आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेशी, महिलानामक किराले काट्छ। ढिलो चाँडो निश्चितरुपमा त्यो दिन आउँछ। माओवादीले बनाएको तमुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, मगराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोचार्, थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा आफैमा माओवादी पार्टी होइन। जातीय सवाललाई राजनैतिकरुपमा उठान गरेर जातीयरुपमा संगठित भएको माओवादीका भातृसंगठनहरु हुन्। यदि माओवादी पार्टीले यी सवालहरुमा ठीकरुपमा उठान गरेर ठीक रुपमा बैठान गर्छ भने उनीहरुले माओवादी पार्टीलाई, राजनैतिक दललाई समर्थन, ऐक्यवद्धता, सहभागिता राख्दछन्। यदि जातीय सवाल नजरअन्दाज गरेर वर्गीय सवाल मात्र ठूलो हो भनेर जाति, भाषा र धर्मको आधारमा शसस्त्र द्वन्द्व १० बर्षे हिंसा प्रतिहिंसा १ मिनेटको टेलर मात्र हुनेछ।
जातीय, धार्मिक, भाषिक आधारमा जुनबेला गृहयुद्ध शुरु हुँदा को कहाँ पुग्छ भन्ने बडो जोखिम छ। लोकतन्त्र समावेशीकरणको कुरा गर्दा थारुवानमा थारुहरुले र लिम्बुवानमा लिम्बुहरुले शासक्तरुपमा उठाएका छन्। थारुवान स्वायत्त प्रदेश माओवादीले खुम्च्याएको र त्यसलाई बढाउनुपर्ने जस्ता कुरा लिएर स्वायत्तता लिइछाड्ने दृढता देख्दा सबैभन्दा पहिला थारुहरुले नै स्वायत्तता लिइसक्छन् कि जस्तो लाग्छ।
हुनत, माओवादीहरुले नौवटा क्षेत्र घोषणा गरे, तर व्यवहारमा आफै जनयुद्धमा लागेको बल्ल शान्ति प्रयासमा अगाडि आइरहेको अवस्थामा स्पष्टरुपमा अगाडि आइसकेको छैन। स्वायत्तताको कुरा गर्दा संघात्मकतामा नगई हुँदैन, एकल राज्य संरचनाको कुनै अर्थ रहँदैन। संघात्मकताको कुरा भौगोलिक तथा गैह्र भौगोलिक राज्य संरचना हुनसक्ने सम्भावनाहरु पनि छन्। डा. ओम गुरुङले चुम्लुङको कार्यक्रममा भाषण गर्दा यो जाति स्वायत्तता त हो, तर यो बसाइँसराइ र जनसंख्याको हलचलले गर्दा जनजातिहरुको आफ्नो बहुमत क्षेत्रहरु छैनन्, त्यसकारण सबैलाई समेट्नु पर्ने हुनाले जातीय स्वायत्तता हुन सक्दैन भन्नुभयो।
यो नितान्त गलत कुरा हो। बाहुन, क्षेत्रीहरुले त्यही कुरा गरेर हामीलाई घाँटी ङ्याक्न खोज्छन्। त्यही बाँदर उफ्राइमा जनजाति आन्दोलनका महासचिव पनि पशुपति र स्वयम्भुको बाँदरजस्तो उफ्रिनु थाल्नुभयो भने सबै उतैपट्टी लागुन् मचाहिँ एक्लै भएपनि आफ्नो अडानमा कायम रहन्छु, र त्यो कुराको विरुद्धमा लडिराख्छु भनेको थिएँ।
जनसंख्या आफैमा घटिबढी हुनुसँग कुनै पनि मतलब हुँदैन। किनकि, कतिपय कुराहरुमा डोमिनेसन र डिस्क्रिमिनेसनको कुरा बढी आउँछ। २३८ वर्ष जनसंख्या तलमाथि पारिएको छ। काठमाण्डौमा नेवारहरुको स्वायत्त प्रदेशलाई बिगारेर अरु सबैलाई ल्याइएको छ। सबैलाई घोलेर एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिको नीतिले भएको हो।
01/13/07 333comment(s)